HTML by Saturngod - MYSTERY ZILLION
October 2009 edited March 2010 in MZ Blog
edu တွင်ရေးထားသော HTML pdf file ထဲတွင် မရှင်းသင့်ဟာများ မေးမြန်းရန်။
ကျွန်တော်မေးကြည်.ချင်တာကတော. အခု တင်ပေးထားတဲ. html ဖိုင်သုံးဖိုင်ကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမှာလဲဆိုတာပါ။
ပြီးတော.ကျွန်တော်မှာကိုစေတန်အရင်ကရေးတဲ. html စာအုပ်ရှိပါတယ်။ခုပေးထားတဲ.စာအုပ်နဲ.ဘာကွာပါသလဲ။
ကျွန်တောှ forum ပိုင်းတွေ ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့စာအုပ်ပါ။ တကယ်လို့ အခုရှိနေတဲ့ စာအုပ်က form အပိုင်းပါရင်တော့ မလိုတော့ပါဘူး။ အခု တင်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်က form အပိုင်းပါပါတယ်။ ဘယ်လို download အဆင်မပြေတာလဲမသိဘူး။
* yyK တော့ ဒေါင်းလို့ရတယ်။ ခုဘဲဒေါင်းကြည့်တာ။ ပြန်ပြီးဒေါင်းလော့ ထပ်လုပ်ကြည့်ပါလား။
ကိုစေတန်ရေးထားသော စာအုပ်မှာ ဖတ်ရှု ့မှတ်သားရန်လွယ်ကူပြီးတော့...ရှင်းလင်းပါတယ်...
နောက်..လူတစ်ယောက်..ဥပမာ..ကျွန်တော်လို ပိန်းတဲ့ကောင်တောင် နားလည်ပါတယ်ဗျာ...
ဒီလိုမျိုးရေးတတ်ဖို ့ဆိုတာကတော့ တကယ်ကို..မလွယ်တာပါ..ကျွန်တော် အိုင်တီကို အရမ်းစိတ်၀င်စား
ပါတယ် ဘာလို ့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော် ပါးစပ်ကနေနုတ်တိုက်ကျက်ပြီးတော့..မဖြစ်ချင်ပါဘူး...
လူတစ်ယောက်ဟာ မိမိ ဦးနှောက်ကို..အသုံးချပြီးတော့...လေ့လာတာက..ထိုလူအတွက်လည်း
အကျိုုးရှိပြီး အောင််မြင်တဲ့ခရီးကို တက်လှမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်ဗျာ အိုင်တီကလည်း..
ဒီလိုပါပဲဗျာ နုတ်တိုက်ကျက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုမှဖြစ်မလာပါဘူး.တကယ်နားလည်မှသာလျှင်..တတ်တာ
ပါ ဒါကြောင့်မလို ့ကျွန်တော်အိုင်တီကို စိတ်၀င်စားတာပါ..နောက်တစ်ခုက ကိုစေတန်ကို အရမ်း
လေးစားပါတယ်ဗျာ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် :77:
You could make easily PDF by referencing from
ကိုစေတန်HTML By Ccrazy
ပုံတင်တဲ့ အပိုင်းမှာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်
ဒီကုဒ် တွေ အတိုင်းသုံးထားတာ
rum ထဲမှာ ပုံလမ်းကြောင်းအတိုင်း ထည့်ပြီး ကြည့်တော့ ပုံတမ်းပေါ်လာတယ်
စာမျက်နှာ ၂၀ အောက်ဆုံးနားမှာ path လမ်းကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ သေချာပြန်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ကိုစေတန် ကျွန်တော် မေးတာ html by crazy က ဟာကိုပါ
ကျွန်တော် သေသေချာချာကို စမ်းကြည့်တာ မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ
အခုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ ဓါတ်ပုံထည့်နည်းတွေ လေ့လာရအောင်ဗျာ.. ကိုယ့်ရဲ့ web စာမျက်နှာကို စာသားသက်သက်ပဲ ဖန်တီးဖို့ တော့ ဘယ်သူမှ စိတ်ပါကြမှာမဟုတ်ပါဘူး.. သက်ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာနေရာလေးတွေမှာ ပုံလေးတွေ ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းဖြင့် ဆိုလိုရင်းကိုပိုမိုထိရောက်စေတာ၊ ပြချင်တာကို အကောင်းဆုံးပြနိုင်တာ.. ပိုမိုလှပပြီး စိတ်၀င်စားဖွယ်ကောင်းစေတာကို ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး..
အော်... ဟုတ်သားပဲ.. ဒါဆိုလည်း ကျွန်တော့်စာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၀ မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ sorry ပဲ.. မေးတဲ့နေရာက HTML by saturngod ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လာမေးတော့ ကျွန်တော့်ဟာထင်လို့..
c:\_documents and settings\_admin\_desktop\_image\_a.png
နေရာမှာ အဲဒီ ပင်ကွင်းပုံရှိလို့လားဗျ။ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ပုံရှိမှ ပေါ်မှာပါ။
desktop ပေါ်မှာ image ဆိုတဲ့ဖိုင်နိမ်းနဲ့ ပုံထည့်ထားပါတယ်
image နဲ့ html file ကို တနေရာတည်းထားပါ။ ပြီးရင်
စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ ၂၀ မှာလည်း ရှင်းပြထားပါတယ်။
အိုကေပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းခန်းကျမှပဲပိုစ့်ရေးဖြစ်တော့တယ်
တစ်လျှောက်လုံးချောင်းနေတာ ကိုစေတန်ကိုခုမိပြီ မပြေးနဲ ့(ဖွတယ်နော်ကိုစေတန်မှာ စာရေးတဲ့စက်တစ်လုံးရှိတယ်တဲ ့အော်တိုမစ်တစ်တဲ့ပရိုဂရမ်နဲ ့တဲ ့)
စာရေးတဲ့စက်တစ်လုံးရှိတယ်တဲ ့အော်တိုမစ်တစ်တဲ့ပရိုဂရမ်နဲ ့တဲ
In this days, I don't have time to write and I want that program for writing instead of me
ဘယ်လိုတုန်း ကိုexiter talk ကကျွန်တော့်မှာရှိတယ်လေ
အစ်ကို ့ဟာကမရှိလို ့
PM Please မေလ်းလေးနော်
ဒါပေမယ့် တခုတော့ ဖြစ်နေသေးတယ် ( ကျွန်တော် စက်က ဖြစ်တယ်လို့တော့ထင်တယ် Registry အပိုင်းပြင်တာလည်း အဆင်မချောဘူး ဖြစ်နေလို့ )
Desktop ပေါ်တင်ထားရင် မရဘူး ပုံဘယ်လိုမှ မပေါ်ဘူး
D ထဲကို ထည့် ပြီး စမ်းကြည့်ရင် တော့ အိုကေ ပဲ
ပေါ်က ကုဒ် အတိုင်း background ပုံထည့်တာ အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ပါ
<BODY BACKGROUND="paper.gif" >